यसरी भयो प्रधानन्यायाधीशलाई विवादित बनाउने षडयन्त्र, जबराले रामशाहपथबाट दिए मुखभरीको जवाफNepalpana - Nepal's Digital Online
नेपालपाना आश्विन १८ २०७८
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको भन्ने हल्लाले बजार पिटेको छ । यो खबर सत्तारुढ दलका नेताहरुबाट योजनाबद्ध रुपमा आएको छ । कतिसम्म भने नाता परेकै कारण प्रधानन्यायाधीशले नाम सिफारिस गरेको भन्ने छ । तर नाता पर्ने कांग्रेसकै कार्यकर्ता हुन् भन्ने तथ्य बिर्सेर योजनाबद्ध रुपमा प्रचार भएको छ । खासगरी बढी भन्दा बढी मन्त्री हात पार्न सत्ता गठबन्धनमा मारामार भइरहेका बेला यो इस्युलाई डाइभर्ट गर्न र प्रधानन्यायाधीशलाई बदनाम गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरु अग्रसर छन् । खासगरी माओवादी माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादवको पार्टीले नियोजित रुपमा प्रधानन्यायाधीशको नाम मुछेका छन् ।
जसमा एक नामको गजेन्द्र हमाल । जो कांग्रेसका पुराना नेता हुन् । यद्यपि हमाल प्रधानन्यायाधीश जबराको आफन्त पनि पर्छन् । अब प्रधानन्यायाधीशको आफन्त भएकै कारण मन्त्री हुनुहुँदैन भनेर कही लेखेको छैन । त्यसमाथि उनी त कांग्रेसको जिल्ला सभापति भइसकेका मान्छे हुन् । देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन हुँदा हमाल पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति भएका थिए । त्यतिबेला साथ दिएको गुन अहिले देउवाले तिर्दा प्रधानन्यायाधीशसँग जोडेर बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
आफ्नो बदनाम गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले कडा प्रतिवाद गरेका छन् । आज विहान सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा जबराले भने, ‘अब जुन नाम आएको छ, एउटा दीपक तिमल्सिनाको आयो । अर्को गजेन्द्र हमालको नाम आयो । गजेन्द्र हमाल भनेको त शेरबहादुर सरहका कांग्रेस नेता हुन् नि । उसँग मलाई जोड्न पर्छ र ! उसलाई मैले बनाउनुपर्छ र ! मैले बनाएर बन्ने हुन्छ र ?’
दीपक तिमल्सिनाको नाममा पनि उनले आपत्ति जनाए । 'मेरो बारेमा झूटो समाचार प्रकाशित गरेर त्यसले स्वतन्त्र न्यायलयमाथि प्रहार गरेको छ । त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो । मबाट त्यस्तो काम हुनै सक्दैन्,' उनले भने । प्रधानन्यायाधीश जबराले वक्तव्य निकालेर खण्डन गर्ने पनि बताए ।
कसैलाई नटेर्ने हिम्मतवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र हटाउन मन्त्रीको नाटक गरिएको खुलासा, को को छन् संलग्न?
आश्विन १८, २०७८ सोमवार १३:०१:५० बजे : प्रकाशित